Dowladda Puntland oo Cadaysay Go\_’aankeeda Doorashada Sanadka Danbe – Radio Daljir
Seteembar 22, 2015 6:25 b 0
Talaado, September 22, 2015 (Daljir) —Kadib markii Soomaliya ay muddo ku jirtay nidaam KMG ah ayaa bishii Agoosto sannadkii 2012 waxaa loo gudbay Dowlad Federal ah oo loo dhan yahay.
Waxaa la dhamaystiray Golayaashii Dowladda waxaana loo igmaday in dowladaasi ay ummadda soomaaliyeed gaarsiiso dowladnimo rasmi ah, soona celiso maqaamkii iyo sharaftii iyo karaamadii ay ummadda Somaaliyeed ku laheyd beesha caalamka. Waxaa gaar ahaan laga rabay ayaduna ballan qaaday in dowladaasi mudada ay xilka hayso ay wax ka qabato xasilinta dalka, sugidda amniga, hirgellinta nidaamka federaalka, sareysiinta sharciga, ilaalinta dastuurka Qaranka, hirgellinta dowlad wanaagga, garsoorka, dhisidda dowladaha xubnaha ka noqonaya DFS ee aan hore u jirin ayadoo la raacayo Dastuurka Qaranka, soo nooleynta dhaqaalaha dalka, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, dib u dhiska dalka, ilaalinta iyo abuurida xiriir caalami ah ee ku saleysan iskaashi iyo wada jir.
Puntland waa asaasihii DFS waana dowladdii ugu horaysay ee buuxisay shuruudaha dastuuriga ah ee habraaca nidaamka federaalka, waxayna diyaar u tahay in ay doorkeedii hogaamin ka qaadato hirgellinta habka federaalka iyo geedisocodka doorashada 2016. Qoraalka hoose waxay Dowladda Puntland ku soo gudbinaysaa aragtideeda, mabaadiida asaagiga iyo hannaanka lagu gaarayo doorasho Agoosto 2016.
Dowladda Puntland waxay aaminsantahay mabaadiida aasaasiga ah ee hoos ku xusan kuwaasoo ay lagama maarmaan tahay in la hirgaliyo ka hor inta aan la qaban doorashada 2016.
5 Xubnood oo ka socda Dowladda Federaalka
11 Xubnood oo ka socda Maamul goboleedyada dastuurka buuxiyey laguna salaynayo gobol walba 1 xubin.
Maamulada aan buuxin shuruudaha dastuurka waxaa mataya DFS.
Waxaa ay qaadanayaan mas’uuliyadda hirgellinta go’aannada kasoo baxa Madasha Wadatashiga Qaran.
Waxay Kormeeri doonaan agaasinka wadatashiyada qaabeysan ee taxanaha ah ee ku xusan qorshe hoowleedka.
Waxay hubinayaan in wadatashiyada si isku mid ah oo loo dhan yahay uga wada qabsoomaan guud ahaan gobolada dalka.
Waxa ay fududeeynayaan isku dubaridka hawlaha siyaasadeed iyo xiriirka xubnaha kala duwan ee Madasha Wadatashiga Qaran.
Waxa ay si istiraatiiji ah u jiheeynayaan una hagayaan qorshaha geedi socodka doorashada 2016.
Waxa ay dammaanad qaadayaan isku xirnaanta iyo in waqti cayiman lagu fuliyo hannaanka wadatashiga.
Waxa ay si joogto ah warbixin u siin doonaan madaxda Madasha Wadatashiga Qaran.
Waxa ay u soo gudbinayaan Madasha Wadatashiga Qaran nuqulka Hagidda iyo Fududeynta Wadatashiga sida ku tilmaaman Qorshe Hoowleedka si ay u ansixiyaan.
Waxa ay abaabulayaan helidda dhaqaale lagu hirgeliyo qorshe hoowleedka.
Ilaalinta waqtiga u dajisan wadatashiyada iyo u gudbinta xogaha la soo uruuriyay Guddi wadatashi Qaran.
Diyaarinta warbixinno usbuucle ah oo loo gudbiyo Guddi Hoowleedka iyo daneeyayaasha kale (Sida deeq bixiyayaasha) iyo warbixinnada kale ee loo baahdo sida shirarka jaraa’id.
12.Diyaarinta maqaallo, bandhigyo iyo khudbado loo diyaariyo Guddi Hoowleedka si ay bulshada guud ahaan ula wadaagaan horumarka laga sameeyay hannaanla wadatashiga.
13.Maareynta maalgelinta iyo mas’uul ka ahaanshaha la xisaabtanka iyo hufnaanta shaqaalaha maamulka iyo hindisahaba.
Dowladda Federaalka (5 xubnood).
Dowlad Goboleedyada waafaqsan Dastuurka (6 Xubnood).
Wuxuu Guddigu leeyahay hoggaaminta iyo maamulidda hoowlaha farsamo iyo fulinta tallaabooyinka hannaanka wadatashiga.
Waxaa ay la tashanayaan daneeyayaasha kala duwan si ay ugu kuur galaan rabitaankooda iyo ka qeyb galkooda si ay talo u siiyan Guddi Hoowleedka.
Maareynta kooxaha Farsamo iyo shaqaalaha la shaqaynaya.
Sameynta barnaamijyo iyo qorshe-hawleedyo faahfaahsan, go’aaminta hawlaha loo baahan yahay, iyo qeexidda kuwa mudnaanta leh si looga miro dhaliyo geedi socodka doorashada 2016.
Waxaa ay xiriir wada shaqeyn iyo xog is-weeydaarsi joogto ah la yeelanayaan Guddi Hoowleedka iyo Maamul Goboleedyada oo dowr muhiim ah ka ciyaaraya hannaan socodka wadatashiga.
Kasbashada taageero iyo kalsooni si ay hannaanka wada tashiyadu uga qabsoomaan gobollada oo dhan, loona hubiyo hannaan quman oo laga wada qayb galayo.
Soo saaridda qorshe hoowleedyo tifaftiran iyo u fududeynta kooxaha shaqada in ay helaan xog sida (in la helo taageerada farsamo ee deeq bixiyayaalka iyo Dowladda haddii loo baahdo).
Waxa ay hubinayaan in maalgelin loo helo GTF iyo Madasha wadatashiga si guud.
Sameynta qorshe lagu raadinayo taageero farsamo iyo saad dibadeed ka hor bilowga hanaanka wadatashiga.